प्रहरीका आँखै अगाडी चोरिन्छन् मोटरसाइकल, हराएका मोटरसाइकल जान्छन् कहाँ?
विराटनगर, २४ असार–विराटनगर महानगरपालिकामा मोटरसाइकल चोरीको घटनामा वृद्धि भएको छ । दिनहुँ हुने मोटरसाइकल चोरीको घटनाले सर्वसाधारण हैरान भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष समापनको ७ दिन अघिसम्म विराटनगर महानगरपालिकाबाट मात्र १ सय १८ वटा मोटरसाइकल चोरी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विराटनगर महानगरपालिकाबाट १ सय १५ वटा मोटरसाइकल चोरी भएकोमा यसवर्ष असार १५ गतेसम्म १ सय १८ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विराटनगरको मालपोत कार्यालय, काली मन्दिर रोड, गुद्री बजार र नोबेल अस्पताललगायतका स्थानबाट बढी मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन् । यो क्षेत्रबाट प्रायः दिनहुँ सर्वसाधारणको मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको छ ।
सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएको मोटरसाइकल पार्किङ गरिएकै ठाउँबाट क्षणभर मै चोरले गायब गरिदिँदा सर्वसाधारण आर्थिक र मानसिकरुपमा समस्यामा पर्दै आइएका छन् । एकै छिन अघि राखेको मोटरसाइक एकैछिनमा गायव हुँने घटना विराटनगरको लागि गम्भीर बिषय बन्न थालेको छ । तर यसलाई प्रहरीले सामान्य रुपमा लिँदै आएकोछ ।
विराटनगर–२ का मनोज कर्ण र विराटनगर–४ का कौसल निरौलाको मोटरसाइकल चोरी भएको लामो समय भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।
पछिल्ला केही दिनका मोटरसाइकल चोरीका घटनालाई हेर्ने हो भने अधिकांश चोरी जिल्ला अदालत मोरङ, नापी र मालपोत कार्यालयको अगाडीको पार्किङ स्थलबाट हुने गरेको मोटरसाइकल धनीहरु बताउँछन् ।
यहीँबाट हरेक दिन २–४ जनाको हेल्मेट हराएँदै आएकोमा पछिल्लो समय आफूले पार्किङ गरि राखेको मोटरसाइकलसमेत चोरी भएको अन्नपुर्ण पोस्टका पत्रकार किशोर बुढाथोकीले बताए । उनको मोटरसाइकल सुनकाण्डका आरोपीलाई अदालतमा हाजिर गराउन ल्याउने क्रममा रिपोर्टिङको लागि गएका बेला चोरी भएको थियो ।
तर यहाँ प्रहरी नभएका पनि हैनन्, तर प्रहरीले यसरी मोटरसाइकल हराउँदा पनि चासै नदिने गरेको मोटरसाइकल हराएकाहरु बताउँछन् । अर्का पत्रकार अर्जुन आचार्यको मोटरसाइकल हराएको पनि महिनौ बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म मोटरसाइकल भेटिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङको विभिन्न क्षेत्रबाट १ सय ३८ वटा मोटरसाइकलहरु चोरी भएका छन् । जसअन्र्तगत सिजुवाबाट दुई, उर्लाबारीबाट तीन र बेलबारीबाट १५ वटा मोटरसाइकल चोरी भएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकासमेत गरी गएको आर्थिक वर्षमा मोरङबाट मात्र १ सय २२ वटा मोटरसाइकलहरू चोरी भएका थिए । दिन बिराएर मोटरसाइकल चोरीका घटना हुने गरे पनि चोरी भएपछि न्यून संख्यामा मात्र मोटरसाइकल फेला पर्ने गरेको छ ।
चोरी भएको सामान बरामद भएपछि मात्र मुद्दा चल्ने कानुनी प्रावधानका कारण मोटरसाइकल चोरीको घटनामा थोरै संख्यामा मात्र मुद्दा चल्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुद्दा चलाउन पनि आलटाल
चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा विराटनगर महानगरपालिकामा जम्मा १२ वटा र मोरङका अन्य ठाउँसमेत गरी मोटरसाइकल चोरीको जम्मा २० वटा मुद्दा प्रहरीले चलाएको छ । ती मुद्दामा ४० जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा ३२ जनालाई पक्राउ गरिएको मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक निशान थापाले जानकारी दिए ।
८ जना फरार रहेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । मोटरसाइकल चोरीलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले विशेष सर्तकता अपनाउँदै आएको थापाको भनाइ छ ।
चोरी गरी लगेको मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट, इन्जीन र रंगसमेत हेरफेर गरिदिने हुनाले बरामद भएका कयौं मोटरसाइकल सवारी धनी स्वयंले पनि नचिन्ने अवस्थाका हुन्छन् । दिनानुदिन मोटरसाइकल चोरीको घटना बढ्दै जानु चिन्ताको बिषय हो ।
बढी पार्किङ र सर्वसाधारणको आउजाउ हुने स्थानहरुमा सिसि क्यामराबाट निगरानी गर्न सकिए यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर त्यस तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको पाईँदैन ।
हराएका मोटरसाइकल कहाँ जान्छन् ?
विराटनगरबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जोगवनीको दुरी करिब ५ किलोमिटर छ । यो दुरीमा भनेको मोटरसाईकलमा पुग्न जम्मा ५ देखि ७ मिनेट लाग्छ ।
विराटनगरको मुख्य सडकहरूमा पार्किङ गरिने मोटरसाइकल चोरीपछि भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको प्रहरीको अनुमान छ । डिएसपी थापाका अनुसार, कतिपय चोरीका मोटरसाइकल नेपाली बजारमा नै डेन्टिङ–पेन्टिङ गरेर चलाउने गरेको पनि पाइएको छ भने अधिकांश हराएका मोटरसाइकल नभेटिनुको कारण भारतीय बजारमा लगिने र फेरी बिक्री हुने गरेको हुनसक्छ, प्रहरीको अनुमान छ ।